Dragon World - နဂါးကမ္ဘာ Slot - Myanmar Online Game
ဒီနေ့မှာတော့ JDBYG မှာရေပန်းအစားဆုံးနဲ့ လူကြိုက်များတဲ့ Dragon World Slot ဂိမ်းလေးအကြောင်းပြောပြချင်ပါတယ်။ ဒဏ္ဏာရီအရ ရှေးလူကြီးတွေပြောခဲ့ကြတာ နဂါး ၅ကောင်စောင့်လျှောက်နေတဲ့ တန်ဖိုးကြီးရတနာရှိခဲ့ပါတယ်။ မောင်းသံကြားလိုက်တာနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ Guardian နဂါးကိုရွေးလိုက်ပါ! ပြီးရင်တော့ ကိုယ့်နဂါးက ရတနာတွေယူဆောင်လာပေးဖို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတော့!
ဒီကစားနည်းမှာ ရွှေနဂါးကိုသာရွေးချယ်မိမယ်ဆိုရင် လျှိူ့ဝှက်ဆန်းကြယ်တဲ့ Multi players တွေနဲ့ Free Turns တွေအများကြီးရမှာပါ။ ဒါအပြင့် 7000X နဂါးရတနာကလဲ စောင့်နေသေးတယ်နော်! ဒီကစားနည်းထဲက Tai Chi ရတနာကလဲ 8X မှ 188X အထိ Tai Chi Symbol တွေခံစားခွင့်ပေးနေပါသေးတယ်။ အဲ့တော့ဘာမှတွေဝေပြီး စောင့်မနေတော့ပဲနဲ့ ဒီ ကံကောင်းခြင်းလမ်းကိုလျှောက်ဖို့အတွက် ကစားနည်းကိုလေ့လာလိုက်ကြရအောင်!
ဒီကစားနည်းမှာ လောင်းဖို့နည်းလမ်း2ခုက Common Bet နဲ့ Extra Bet ဆိုပြီးရှိပါတယ်။ Extra Bet အတွက်အနည်းဆုံးလောင်းကြေးကတော့ 1.8 Points ပါ၊ Common Bet အတွက်ကတော့ 1.2 points နဲ့တင်ရပါတယ်။ ဒီတော့ Extra Bet နဲ့ဘာလို့ ပိုပေးပြီးလောင်းကြေးထည့်သင့်လဲဆိုပြီး မေးစရာရှိလာပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်တော့ Extra Bet နဲ့ဆိုရင် ရလဒ်နည်းပြီး သိပ်အရေးမကြီးတဲ့ A, K, Q, J, 10,9တို့လိုမျိုး Symbol တွေမပါတော့ပဲနဲ့ ကျန်တဲ့ ပါဝါရှိတဲ့ Symbol တွေနဲ့သာကစားနည်းကိုဆော့ခွင့်ရမှာပါ။Extra Bet လောင်းကြေးဖွင့်ဖို့အတွက်ဆိုရင် Slot ကွက်ရဲ့အလယ်အောက်မှာ “Extra Bet” ဆိုတဲ့ခလုပ်လေးရှိပြီး Inactive ပြနေရင်ပိတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် နှိပ်ပြီးတော့ Active ဖြစ်သွားအောင်လုပ်ပြီး ဖွင့်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ ခုနကပြောခဲ့တဲ့ Symbol တွေမပါတော့ပဲ လုံးဝအနှစ်အပြည့်နဲ့ Slot ကို လောင်းကြေးနည်းနည်းလေးတိုးရုံနဲ့ခံစားနိုင်မှာပါနော်!
Player အသစ်တွေအတွက်ပိုပြီး အဆင်ပြေစေပါတယ်
ခမ်းနားတဲ့ လပ်ကီးဆုကြီး 4800 Multiples အထိခံစားခွင့်ရှိမှာပါ
Player က Permanent Bet ကိုသာသုံးပြီးကစားမယ်ဆိုရင် High Multiples တွေနဲ့အနိုင်ရဖို့အခွင့်အရေးရှိပါတယ်
ဒါမှမဟုတ်လို့ Extra Bet နဲ့လဲစမ်းဆော့ကြည့်နိုင်ပါတယ်
အတွေ့အကြုံရှိပြီးသား Player တွေအတွက် ပိုပြီးသင့်တော်ပါတယ်
ခမ်းနားတဲ့ လပ်ကီးဆုကြီး 7000 Multiples အထိခံစားခွင့်ရှိမှာပါ
Permanent Bet ကသုံးပေးပြီးသားပါ
Player တွေက လောင်းကြေးကိုတစ်လှည့်စီ တိုးပြီးတော့လဲ ဆော့ကစားနိုင်ပါသေးတယ်
“Free Spin Bonus Symbol” သာ အနည်းဆုံး ၃ခုဆက်တိုက် ဘယ်မှညာကျမယ်ဆိုရင် Free Game Prize ကိုခံစားခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ခံစားခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း နဂါး ၅ ကောင်ထဲကတစ်ကောင်ကို ရွေးချယ်ရပါတယ်။
“Wild” နဲ့ကျတဲ့အနိုင်အားလုံးကို ဆတိုး Multiply လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းမှာ Wild တစ်ခုထက်ပိုမယ်ဆိုရင် ကျပန်း Multiplayer တစ်ခုထဲသာ သက်ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Free Spin လှည့်နေစဉ်မှာသာထပ်ပြီး Free Spin Symbol ညာမှဘယ် ဆက်တိုက် ၃ခုထပ်ကျမယ်ဆိုရင် Free Spin တစ်ခါထပ်ပေါင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။
အများဆုံး Free Spin3ခုအထိထပ်ရနိုင်ပါတယ်
ဒီလိုမဟုတ်ပဲ Free Spin အသစ်ပြန်လှည့်ဖို့အတွက်ကတော့ လက်ရှိ Free Spin အလှည့်ကုန်သွားမှသာ Free Spin Symbol ၃ခုအနည်းဆုံး ဘယ်မှညာ ပြန်ကျပြီး နဂါးပြန်ရွေးပြီးလှည့် ရမှာပါ။
Free Spin Bonus စရတဲ့အချိန်မှာ လောင်းထားတဲ့ လောင်းကြေးအတိုင်းပဲ Free Spin မှာလဲ လောင်းကြေးရမှာပါ။
Extra Bet ရဲ့အစွမ်းများ
Player ကသာ Extra Bet ကိုဖွင့်ထားပြီး Free Game ဆုရခဲ့မယ်ဆိုရင် သိပ်ပြီး ရလဒ်မကောင်းတဲ့ Symbol တွေဖြစ်တဲ့ A, K, Q, J, 10,9တွေကိုဖယ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ပုံမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်း လုံးဝအကောင်းစား Symbol တွေသာဆက်တိုက်ကျမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ရလဒ်ကအရမ်းကိုကောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။
အနိုင်အားလုံးကို ဘယ်မှညာ တွက်ပါတယ်
အနိုင်အားလုံးက 1 Credit လောင်းကြေးပြပါတယ်
Yin Yang Bonus Game
YinYang Symbol က ပထမဆုံးလိုင်းနဲ့ နောက်ဆုံးလိုင်းမှာတစ်ခုစီပေါ်လာမယ်ဆိုရင် YinYang Bonus game ကိုကစားခွင့်ရမှာပါ
YinYang game မှာ YinYang Symbol 12 ခုပေါ်လာမှာဖြစ်ပြီး အရောင်တူလှန်ရတဲ့ကစားနည်းလိုပဲ အရောင်တူနဂါး၃ကောင်ပေါ်လာရင် သက်မှတ်ထားတဲ့အမှတ်ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်
ဒီကစားနည်းဟာ ဖြစ်နိုင်ခြေပေါင်း 243 ခုရှိပြီးတော့ အများဆုံးအနိုင်အနေနဲ့ 7000 Multiples(X) ရှိတာမို့လဲ Player တွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုသိမ်းပိုက်ထားနိုင်တာဆိုလဲမမှားပါဘူး။ Bonus ဂိမ်းမှာရလဒ်နည်းတဲ့ symbol တွေကိုဖြုတ်နိုင်တာ၊ Bonus ဂိမ်းမှာ Multiplayer မတူတဲ့နဂါး ၅ ကောင်ရွေးနိုင်တာ တွေကြောင့် ဒီ Dragon World နဂါးကမ္ဘာကိုတော့ တစ်ခေါက်လောက် အလည်သွားကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်!
Yin Yangon Bouns